सित्तैमा डोमेन रजिस्टर गर्ने हो ? लौ यसरी गर्नुहोस् – Nepali Tech Blog
रजिस्टर गर्नु भन्दा पहिले कृपया पुरै लेख राम्ररी पढ्नुहोला ।
हो, सित्तैमा डोमेन रजिस्टर गर्न सकिन्छ । तपाई ब्लग अथवा वेबसाइट बनाउँन चाहनु हुन्छ भने सबैभन्दा पहिले चाहिने भनेको डोमेन अर्थात वेबसाइट/ब्लगको नाम नै हो । तर सोचे जस्तो डोमेन नाम पाउँनु अब कम्ता अफ्ठ्यारो छैन । अंग्रेजी सजिला शब्दहरुका प्राय पहिले नै वेबसाइट बनिसकेका छन् या त कसैले पहिले किनेर बेच्न राखिसकेको छ । कति नामहरुको लागि त हजारौँ डलर तिर्नु पर्ने हुन सक्छ । हामीले सुरु गर्ने ब्लग तथा साइटहरु केहि हजार नेपाली बजेटका हुन्छन् सामान्यतया । यसैले यहाँ ति हजारौं डलर मुल्यका डोमेन नामहरुको कुरै नगरौँ किनकि हामी यहाँ सित्तैमा डोमेन रजिस्टर कसरी गर्ने भन्ने बारेमा कुरा गर्दैछौँ ।
यो पढ्नुहोस् : [p2p type=”slug” value=”%e0%a4%b5%e0%a5%87%e0%a4%ac%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%87%e0%a4%9f%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%96%e0%a5%8d%e0%a4%a8″]वेबसाइटको नाम कसरी राख्ने ?[/p2p]
१. डोमेनको अन्त्यमा डट एनपी (.np) हुने गरि रजिस्टर गर्ने तरिका : तपाईले नेपालमा रहेर निशुल्क डोमेन रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ । मर्केन्टाइल कम्युनिकेसन नेपालका लागि कन्ट्रिकोड टप लेभल डोमेन रजिस्टर गर्ने एकमात्र संस्था हो । पछाडी डट कम, डट ओआरजी आदि भएको डोमेनलाई टप लेभल डोमेन भनिन्छ । त्यो भन्दा पछाडी अथवा अन्त्यमा देशको कोड रहने डोमेनलाई न्ट्रिकोड टप लेभल डोमेन वा जेनेरिक डोमेन पनि भनिन्छ । तपाईले मर्केन्टाइलबाट निशुल्क दर्ता गर्दा डोमेन www.yourdomain.com.np हुनेछ । निशुल्क डोमेन रजिस्टर गर्ने भन्दैमा जे नाम राख्न पनि पाउँने भने होइन, व्यक्तिको नागरिकताको नाम अनुसारको र संस्थाको आधिकारिक नाम अनुसारको डोमेन मात्र रजिस्टर गर्न सकिन्छ । मर्केन्टाइलमा ‘डट कम डट एनपी’ बाहेक अन्य ‘डट नेट डट एनपी’, ‘डट इन्फो डट एनपी’ आदि १७ किसिमका डोमेनहरु रजिस्टर गर्न सकिन्छ ।
मर्केन्टाइलमा डोमेन रजिस्टर गर्न : यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्
२. निशुल्क डट सिओ डट एनआर (.co.nr) : यसमा रजिस्टर गर्दा तपाईको डोमेन www.sitename.co.nr जस्तै हुन्छ । यसलाई तपाईले निशुल्क वेबसाइट, ब्लग, फोरम अथवा अन्य सबै किसिमका वेबपेजका रुपमा प्रकाशित गर्न सक्नु हुनेछ । यसमा युआरएल रिडाइरेक्सन, युआरएल मास्किङ गर्न सकिन्छ भने आफ्नै फ्याभिकनको प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसमा मेटा ट्याग सपोर्ट गर्छ । तर यसमा डिएनएस परिवर्तन गर्न सकिदैन ।
निशुल्क डट सिओ डट एनआर (.co.nr) डोमेन रजिस्टर गर्न : यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
३. निशुल्क डट सिओ डट एनआर (.co.nf) : Biz.nf मा यो .co.nf डोमेन निशुल्क रजिस्टर गर्न सकिन्छ । यसमा रजिस्टर गर्दा डोमेन www.sitename.co.nf जस्तो हुन्छ । यतिमात्रै होइन, यसमा रजिस्टर गरेका डोमेनसँगै Biz.nf मा निशुल्क होस्टिङ पनि पाइन्छ । यसमा निशुल्क पाइने डोमेनमा प्रिमियम डोमेनमा हुने सबै सुविधा हुन्छ भने २५० एमबि पाइने सित्तैको होस्टिङमा वर्डप्रेस, जुम्ला लगायत वेबसाइट निर्माण टुलहरु पनि इन्स्टल गर्न सकिन्छ । कम स्पेश भएकाले यसमै आधारित भएर डोमेन चलाउँन त सकिदैन तर डेमोको रुपमा या सिक्नका लागि प्रारम्भिक चरणमा उपयोगी हुन सक्छ ।
निशुल्क डट सिओ डट एनआर (.co.nf) डोमेन रजिस्टर गर्न : यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
४. निशुल्क .co.cc : मैले भर्खरै ब्लगिङ सुरु गर्दाताका यो डोमेन खुब चलेको थियो । यसमा निशुल्क डोमेन रजिस्टर गर्ने अनि ब्लगस्पटमा बनाएको ब्लगलाई यसमा रिडाइरेक्ट गर्ने । यसो गर्दा आफ्नो ब्लगको लामो नाम भनिरहनु पर्दैन थियो भने भिजिटरलाई पनि छोटो नाम सम्झिन सजिलै हुन्थ्यो । तर गुगलले यसलाई बेन्ड गरे पछि भने यसको उपयोगिता सकिएको झै भएको छ । बरु लामो नामको ब्लग भन्नुस् धेरै बेर लगाएर तर यसमा रजिस्टर गरेर ब्लग नचलाउँनुहोस् ।
तपाईलाई झट्ट सुन्दा लाग्ला, सित्तैमा डोमेन रजिस्टर गर्न पाए किन फोगटिया पैसा तिरेर डोमेन किन्ने ? विचार सहि हो । तर सोच्नुहोस् त, पक्कै केहि त बेफाइदा छ निशुल्क डोमेनहरुको र त किन्छन् पैसा खर्च गरेर डोमेन । एक पटक हेरौँ है त ।
पैसा तिर्न नपर्ने ।
छोटो समयका लागि मात्रै वेबसाइट बनाउँनु परेमा खर्च गर्न नपर्ने ।
सिक्दा बिग्रिए पनि दुखमन नहुने ।
लिमिटेड सर्भिस हुन्छन् । थोरै पैसा तिरेर किनेका डोमेनमा पाइने आवश्यक कतिपय सर्भिसहरु यसमा हुदैनन् । जस्तै: रिडाइरेक्ट गर्ने, नेम सर्भर अपडेट गर्ने आदि ।
सित्तैमा पाइने अधिकतम् डोमेनहरु सर्च इन्जिन अमैत्री हुन्छन् । सर्च गर्दा गुगल, विङ हरुमा नभेटिन सक्छ ।
एक बर्ष पछाडी जब तपाईले निशुल्क डोमेन छोड्नुहुन्छ तब तपाई सबै भिजिटर, पेज र्याङ आदि शुन्यमा झर्छन् ।
बोनस टिप्स : तपाई यदि सित्तैमा डोमेन रजिस्टर गर्न चाहनु हुन्छ भने होस्टिङ किन्नुस् । पहिले तपाईले डोमेन कतैबाट जोहो गर्नु भयो भने पनि पछि होस्टिङ चाहिन्छ नै । बरु सुरु मै होस्टिङ किन्नु भयो भने सो सँगै एउटा डोमेन पनि पाउँनु हुनेछ सित्तैमा । (त्यो एउटा डोमेन सित्तैमा नै हुन्छ, डोमेन लिदा बढि पैसा र नलिदा कम पर्ने हुन्न ।)
यो पढ्नुस् : किन किन्ने होस्टिङ ?
सित्तैमा डोमेन पाउँन तलका मध्ये जुन सुकै होस्टिङमा कम्तिमा एक बर्षको होस्टिङ किने हुन्छ । वर्डप्रेसमा ब्लग बनाउँन मेरो सिफारिसमा पर्ने यीनै होस्टिङ कम्पनीहरु हुन् ।
१. होस्टग्याटर (Hostgator)
२. ब्लुहोस्ट (Bluehost)
३. आइपेज (iPage)
यदि तपाई गोड्याडीमा सस्तैमा डोमेन रजिस्टर गराउँन चाहनु हुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोस् । सम्पर्कका लागि यसकै कमेन्टमा लेखेर वा वेबसाइटको सम्पर्क पेजमा गएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ ।
do not miss latest गोड्याडी डोमेन
NK PURAN April 23, 2014 at 5:22 am
गोड्याडीमा नि:शुल्क नभए जस्तो लाग्छ।
subarna October 16, 2014 at 12:52 pm
किन नहुनु ६ नि hoina
ganesh karki Author	 July 7, 2015 at 10:03 am
गोड्याडीमा निशुल्क छैन । आफैसँग पैसा तिर्नका लागि भिसा कार्ड भए सस्तोमा किन्न भने सकिन्छ । तपाईले सस्तैमा लेखिएकोलाई सित्तैमा पढ्नुभयो होला ।
bharat October 31, 2015 at 5:43 am
राम्रो छ लेख